🥇 ▷ IPad 6 Ma Biyo-Bixiyuhu? Tijaabad fiidiyow ayaa na tusaysa ✅
IPad 6 Ma Biyo-Bixiyuhu? Tijaabad fiidiyow ayaa na tusaysa
Tijaabadu waxay tijaabisaa iska caabbinta iPhone 6 ee biyaha
Waxaa jiray isticmaaleyaal badan oo filayey in, ay ka mid yihiin riwaayadihii ugu horreeyay ee cusub ee iPhone 6 iyo iPhone Plus, Apple waxaa ku jiri lahaa caddeynta IP67 ama waxa ay ka dhigan tahay, in aaladaha cusub ee sare ee shirkadda Californian ay lahaan karto awood u leh inay iska caabbiso siigada iyo biyaha., sida Samsung Galaxy S5, in kasta oo intii lagu jiray soo bandhiggooda rasmiga ah rajooyinkaas la waayey. Hadda waxaa jira su’aasha ah intee in leeg ayay iPhone awood u yeelan doontaa inay iska caabido biyaha hoostiisa?
IPhone 6 waa la quusin doonaa biyaha miyay sii socon doontaa?
Qoraaga fiidiyowgu wuxuu ahaa TechSmartt, oo sida aan arki karno, ka hor intaan la tijaabin iPhone 6 adoo ku quusanaya biyaha hoostooda, waxay bilaabaysaa saacad-joogsi aaladda isla ujeedada Muuji ilaa inta uu iPhone 6 ku shaqeynayo xaalad la mid ah.
Fiidiyowga waxaad ku arki kartaa markii aad ka tageyso iPhone 6 hoosta xumbada biyaha waxay bilaabaneysaa inay ka soo muuqato kuwa ku hadla iyo isku xiraha jaakadaha ee aaladaha madaxa, aalad aan aheyn astaan ​​wanaagsan maxaa yeelay tani waxay ka dhigan tahay in, sida iska cad, ay soo galeyso Biyaha. gudaha aaladda. Calaamadaha ugu darani waa marka shaashadda, oo wali ku socota orodka saacadda, uu bilaabo inuu qayb ahaan mugdi galo illaa uu damo.
Dabcan, baaritaan noocan oo kale ah ma uusan yeelan doonin cawaaqibyadan oo keliya, waxaa jira waxyeelooyin kale oo aad u badan tahay inaadan jeclaan doonin inaad ku lumiso muuqaalka hoose ee aad ka heli doonto:
IPhone 6 ma yahay mid biyaha celin kara, inkasta oo aysan biyuhu biyuhu ahayn
Sidaad u qaddarin karto, cusub ee iPhone 6 wuxuu awood u leeyahay inuu iska caabiyo ku dhawaad ​​hal daqiiqo oo biyo hoosaad ah ilaa ay gabi ahaanba damiso. Xaqiiqdii, qalabku kama jawaabayo isku day kasta oo la daminayo marka la riixayo badhamada, si kastaba ha noqotee, Flash Flash-ga ayaa shidaaya oo sii jiraya markasta. Sida iska cad habdhaqankan gebi ahaanba waa mid nasiib-darro ah oo la yaab leh, waa wax iska caadi ah inay dhacaan markii la qooyo aaladda aan biyuhu ka-dhawayn.
Fiidiyow kale oo isna la heli karo oo kaas oo iPhone 6 lagu dhex ridayo haan biyo ah oo laga soo qaatay dhawr ilbidhiqsiyo gudahood. Natiijadu waa mid macquul ah oo la arko natiijooyinka tijaabadii hore, iPhone wuxuu ka gudbaa imtixaanka wuxuuna sii wadaa shaqadiisa iyada oo aan wax dhibaato ah.
Kuwani waa tijaabooyin kale oo aad u ba’an kuwaas oo iPhone 6 cusub horey loo tijaabiyay runtiina, maadaama ay diyaar u tahay wadamo badan, waxaan arki karnaa fiidiyowyo badan oo noocan ah.
Dabcan, waxaan kugula talineynaa inaadan tijaabin tijaabooyinkaan cusub iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus.